ट्यूनाका साथ सिंहहरू - थर्मोमिक्स रेसिपीहरू ThermoRecines
एपेटाइजरहरू40 मिनेट20 व्यक्ति
पक्कै पनि तपाईं मध्ये धेरैले पहिले नै देख्नुभएको छ कि यो थर्मोमिक्स® संग Lyonnaise बनाउन कत्ति सजिलो छ। द चौक्स पेस्ट्री यो सरल छ; मक्खन, पीठो र अण्डा। हामी सामान्यतया तिनीहरूलाईaसंग उपभोग गर्छौं मीठो भरिएको राम्रो त्यो पेस्ट्री क्रीम, क्रीम वा ट्रफल हो। तर यस पटक हामी तिनीहरूलाई एक भर्न जाँदैछौं नुनिलो क्रीम aperitif को रूपमा हामीलाई सेवा गर्न।
यो रेसिपीहरू मध्ये अर्को हो जुन हामीले हाम्रो खातालाई व्यवस्थित गर्दा ध्यानमा राख्न सक्छौं क्रिसमस को लागी मेनू। एक हप्ता अघि सिंहीहरूलाई तयार पार्ने जत्तिकै सरल, तिनीहरूलाई फ्रिज गर्ने र बेलुकाको खानाको अघिल्लो रात तपाईंले तिनीहरूलाई डिफ्रोस्ट गर्न दिनुहुन्छ। तिनीहरू टुना क्रीमले भरिएका छन् र सफल हुन तयार छन्!
हामी तिनीहरूलाई अरूको साथमा हाम्रा पाहुनाहरूलाई प्रस्ताव गर्न सक्छौं एपीरिटिभोस, नट, अचार ...
1 ट्युनाको साथ लिओनोइज
केही सिंहनीहरू नुनिलो क्रीमले भरिएका छन्।
१ अण्डाको पहेंलो
२ चम्मच तिलको दाना
१०० जी टुना (२ साना क्यान)
¼ चम्मच नींबू उत्साह
१ र ½ चम्मच crème फ्रेम
हामी धेरै बेकिंग ट्रेलाई ग्रीसप्रूफ पेपर वा समानसँग लाइन गर्छौं।
हामी गिलासमा मक्खन, पानी, चिनी र नुन खन्याउँछौं। कार्यक्रम गर्छौं Minutes मिनेट, १००º, गति १।
हामी ढक्कन खोल्छौं र एकैचोटि आटा जोड्छौं। हामी समयमा मिश्रण गर्छौं Seconds सेकेन्ड गतिमा।
मिश्रणलाई केही मिनेटको लागि चिसो हुन दिनुहोस्, गिलासलाई यसको सामान्य स्थितिबाट हटाउनुहोस्।
जब तापक्रम घट्यो, हामी गिलासलाई यसको स्थान र कार्यक्रममा फिर्ता राख्छौं गति 4, कुनै समय छैन, र हामी मेसिनले काम गरिरहेको बेला मुखले हल्का पिटेका अण्डाहरू एक एक गरेर थप्दैछौं।
हामी धेरै मिसाउँदैनौं।
जब हामीसँग आटा हुन्छ, हामी यसलाई पेस्ट्री झोलामा खन्याउछौं र पहिले नै तयार पारिएको ओभन प्लेटहरूमा सानो थुप्रो बनाउँछौं, धेरै अग्लो छैन।
हामी तिनीहरूलाई अण्डाको पहेँलोसँग पेन्ट गर्छौं र माथि तिलको बीउ छर्काउँछौं। हामी 15º मा 200 मिनेटको लागि ओवनमा राख्छौं।
जब तिनीहरू चिसो हुन्छन्, हामी तिनीहरूलाई भर्न सक्षम हुन सिंहीहरूको तल्लो भागमा सानो काट्छौं।
हामी प्याजको चौथाई गिलासमा राख्छौं र यसलाई काट्छौं Seconds सेकेन्डको गतिमा.
गिलासमा टाँसिएका टुक्राहरूलाई तल राख्नुहोस्। हामी मक्खन र कार्यक्रम समावेश गर्दछौं Minutes मिनेट, º०º, चम्चा गति।
समय बितिसके पछि, राम्रोसँग निकासी गरिएको टुना, लेमन जेस्ट, क्रीम र काली मिर्च थप्नुहोस्। हामी समयमा मिश्रण गर्छौं Seconds सेकेन्ड गतिमा।
त्यसपछि हामी मिश्रणलाई पेस्ट्री झोलामा प्रस्तुत गर्छौं जसमा साँघुरो आउटलेट हुनुपर्छ।
हामी नोजल प्रयोग नगरी सिधै शेरनीहरू भर्छौं।
हामी शेरनीहरूलाई ट्रेमा राख्छौं र सेवा गर्छौं।
याद गर्नुहोस्, ओभन ट्रेमा, सिंहीहरू एकअर्काबाट अलग हुनुपर्छ किनभने तिनीहरू पकाउँदा तिनीहरू बढ्नेछन्।
थप जानकारी - क्रीमको टोकाइ
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: एपेटाइजरहरू, सजिलो, १ घण्टा भन्दा कम, क्रिसमसको
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » एपेटाइजरहरू » ट्युनाको साथ लिओनोइज
नमस्ते मायरा, मैले यो रेसिपी देखेको छु र यो एकदमै राम्रो देखिन्छ कि यो धेरै नै स्वादिष्ट हुनुपर्दछ, तर मसँग डुका छ, यदि तपाई मलाई बताउन सक्नुहुन्छ कि यो crème fr telliche के हो र मैले कहाँ पाउन सक्दछु वा यदि यो अरू केहि प्रतिस्थापित गर्न सकिन्छ। धेरै धेरै धन्यबाद, म तपाईको व्यंजनहरु बारे सँधै सचेत छु। अंगालो।
एन्जलसलाई जवाफ दिनुहोस्
सबै भन्दा पहिले, तपाइँको टिप्पणी को लागी र हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा धन्यवाद!
Crème फ्रेशे क्रीम हो, क्रीमको समान, तर ताजा। Fat० र %०% बीचको फ्याटको प्रतिशतको साथ। तपाइँ यसलाई लगभग कुनै पनि सुपरमार्केटमा, क्रीम र Butters बीचमा पाउनुहुनेछ।
जे भए पनि, तपाई जहिले पनि क्रीमको समान मात्रा प्रतिस्थापन गर्न सक्नुहुनेछ।
एस्टर पेरेज- HUELVA भन्यो
नमस्ते मायरा, यो नुस्खा आदर्श र अति छिटो देखिन्छ, म तिनीहरूलाई मन पराउँछु, तर मलाई एन्जलसको जस्तै शंका छ, यदि तपाईंले हामी दुवैलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ भने। यस रेसिपी साझा गर्न को लागी धेरै धन्यबाद।
एस्टर पेरेज- HUELVA लाई जवाफ दिनुहोस्
जब तपाईं टिप्पणी लेख्दै हुनुहुन्थ्यो मैले तपाईंको प्रश्नहरूको उत्तर दिइरहेको थिएँ ... यो संयोग हो!
म आशा गर्छु कि मैले एन्जलसलाई दिएको उत्तरले तपाईंलाई मद्दत गर्दछ!
हेलो मायरा म तपाईंको रिसिप्टलाई माया गर्छु तर मलाई थाहा छ चाहिन्छ फेनेल सीड्सको राशिले यो लिन्छ यो इन्जिनमा देखा पर्दैन, तर तयारीका लागि धन्यवाद
Yeya लाई जवाफ दिनुहोस्
मैले भर्खरै नुस्खा परिमार्जन गरेको छु। सत्य यो हो कि मूल विधिमा सौंफको बीउ प्रयोग गरियो, तर जब मैले सिंहहरू बनाएँ, कतिपयले ती बीउहरू भरिदिए र अरूलाई समान पेस्टले तर बीउ बिना र विजयी बनाए। त्यसो भए, जबसम्म तपाईं सौंफको प्रशंसक हुनुहुन्न, तपाईंले तिनीहरूलाई अझ राम्रोसँग राख्नुहुन्न।
नयाँ बर्षको शुभकामना!!!। यी लियोनाइस कस्तो छ? हामीले तिनीहरूलाई माया गरेका छौं, ती स्वादिष्ट छन्। तिनीहरू नयाँ वर्ष पूर्वानुमानमा हाम्रो भाँडा मध्ये एक हुन्।
तपाईंलाई यो मनपर्‍यो भन्ने कुरा थाहा पाउँदा म खुशी भएँ। यस प्रकारका टिप्पणीहरू सुन्न पाउनु आनन्दको कुरा हो!
नमस्ते मायरा, म तपाईलाई मेरो श doubt्काबाट हटाउन चाहन्छु,
के पेस्ट्रीको पीठो सामान्य छ, बिस्कुटको पिठो, वा के हो?
के यो मर्काडोनामा त्यहाँ धेरै प्रकारका पीठाहरू छन् ...
हसेन्डाडो ब्रान्डको पेस्ट्रीको पिठो (मर्काडोनाको) गहुँको पीठो राख्ने हो।
सोरया च भन्यो
के तिनीहरू भर्नको साथ स्थिर गर्न सकिन्छ वा तपाईंले ती खाना खान जाँदैछ भोल भैरहेको हुनु पर्छ? शुभकामना।
Sorayafमा जवाफ दिनुहोस्